भ - Panos South Asia
भ – भ्रुण हत्या | Writer – Rita Baramu | Artist – Sabita Dangol
भु्रण हत्याको कुरा गर्दा गर्भपतन र यस सम्बन्धी अधिकारको बहस पनि सँगसँगै आउँछ । विगतमा गर्भपतनलाई भ्रुणको हत्या गरेको मानी अपराधको कोटीमा राखिएको थियो । समाज र कानुनको आँखामा भ्रुणको हत्या गर्नु भनेको मान्छेको हत्या गर्नु सरह थियो । त्यस्तो भ्रुण जो जीवित तर निरीह र जन्मिनको लागि तयार छ । समाज र कानुन भन्थ्यो, गर्भपतनले मानिसको जन्मिन पाउनै हक नै खोस्ने गर्छ । तर विश्वको नारीवादी बहस र अभियानसँगै महिलाहरुले एकै गर्जनमा भने “मेरो शरीर मेरो अधिकार”। मेरो शरिरमा न परिवार न राज्य, कसैको पनि दखल नहोस् खाली मेरै मात्र अधिकार र स्वामित्व होस् । आफ्नो शरिरमा आफ्नै स्वामित्वको लागि लडिरहदा १९६० ताका पछि मात्र विश्वका महिलाहरुले निश्चित शर्तहरु सहित गर्भपतनको अधिकार पाए । नेपालमा वि.स. २०५८ (सन् २००२) मा महिलाहरुलाई गर्भपतनको अधिकार दिइएको हो । त्यसयता उनीहरुले गर्भपतन गरेकै आधारमा जेलको सजाय काट्नु परेन । तर गर्भपतन वैध हुनका लागि निश्चित मापदण्डहरु भने तोकिएको छ ।
समस्या यतिमै आएर सकिदैन । अझै पनि सन्तानलाई भगवानको वरदान ठान्ने र गर्भपतनलाई अपराध मान्ने जमातको वर्चश्व रहेकै छ । बलात्कार, हाडनाता करणी वा महिलाको ज्यानलाई खतरा हुने सम्मको गर्भपतनलाई केही हदसम्म स्वीकारिएता पनि महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले गराउने गर्भपतनलाई अवैध शारिरीक सम्बन्धका कारण बसेको बच्चा हो भनिन्छ र उसको चरित्रलाई नै प्रश्न गरिन्छ । यो सबै महिलाको यौनिकता नियन्त्रण गर्ने पितृसत्ताको खेल हो । यद्यपि लिङ्ग पहिचानद्वारा गरिने भ्रुण हत्याको समस्या भने हामी कहाँ विकराल रहेको सत्य हो । अनि जब गर्भपतनको अधिकारको सवाल उठ्छ तब गर्भपतन विरोधी जमात लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भ्रुण हत्याको विषय उछाल्दै गर्भपतन कै अधिकार कुण्ठित गर्नुपर्ने तर्क राख्छन्। त्यसले समस्यलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
विश्वमा प्रत्येक १०० बालिकामा १०५ बालकहरु जन्मिन्छन् जुन जैविक आधारमा औसत आँकडा नै हो । तर सन् २०१९ मा नेपालको ६ वटा ठूला अस्पतालमा करिब ७०००० महिला सम्मिलित सन् २०१५ देखि २०१७ को विचको जन्म आँकडालाई आधार मानी गरिएको ल्याण्डमार्क रिसर्चका अनुसार नेपालमा प्रत्येक १०० बालिकामा ११७ बालक जन्मिएको देखिन्छ । अझ पश्चिमाञ्चलको अस्पतालको आँकडामा प्रत्येक १०० बालिकामा १२१ बालक जन्मिएको आँकडा रहेको छ । (रेकर्ड नेपाल, मे २८, २०१९)
लिङ्ग पहिचानद्वारा गरिने भु्रण हत्या किन हुन्छ? किनकी हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक मुल्य-मान्यताले ग्रसित छ । पुरुष केन्द्रविन्दुमा रहने गरी हरेक संस्कार, नीति-नियम, कानुनहरु बनेका छन् । त्यसैको पालना हुँदै आएको छ । पुरुष नै परिवारको अंश र वंश दुबैको अधिकारी हो । त्यसैले मर्नु अघि आफ्नो वंश रक्षा भएको र अनेक कर्मकाण्ड सहित आफ्नो वैकुण्ठ धाम भएको हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने बाबु आमा हेर्न चाहन्छन् । त्यस्तै छोरी भनेको जन्मायो हुर्कायो अर्काको घरमा पठाउनु पर्ने जात । छोरा भनेको कुलको वंश धान्ने साथै कमाइ गरी घर ल्याउने मान्छे भनेर बुझिन्छ । यस्ता विभेदकारी र एकतर्फी बुझाइले पनि लिङ्ग पहिचानद्वारा गरिने भ्रुण हत्या मौलाएको छ । जुन लैङ्गिक विभेदको पराकाष्ठा हो । यसले महिलाको स्वेच्छाले गर्ने गर्भपतनको अधिकारलाई पनि मारमा पारिरहेको छ ।